သတို့သမီးအမည် ပါမလာတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် သတင်း - မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့
သတို့သမီးအမည် ပါမလာတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် သတင်း
(eric kim က ဇန္န၀ါရီလ 21, 2012 နေ့ 12:43pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်)
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တအံ့တသြ ဖြစ်နေကြတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေ ရဲ့ သားငယ် မင်္ဂလာဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်ကို ဖော်ပြချင် စိတ်များသွားလို့ ထင်ပါရဲ့ ။ သတို့ သမီး နာမည် ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ သတို့သမီးက ဘယ်သူများပါလိမ့် တဲ့။ သတင်းထဲ ပျောက်နေတဲ့ သတို့သမီးဟာ ရဲမှူးကြီး မိုက်ကယ်လှမြင့်လား၊ ဒေါ်တင်တင်မြင့် ဆိုတာများလားလို့ တချို့ကလည်း ထင်ချင်နေကြတယ်။ ကြည့်ရှူ့သွားသူ - 1075
အညွန်း - သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း နှစ်သက်တယ်0members like this
‹ ရှေ့ သို့ နောက်ပိုစ့်တွေ ››
ကျော်ထွေး က မတ်လ 20, 2013 ရက်နေ့ 8:40pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား အော်..popular.ဖြစ်ခြင်လို့ပေါ့နော် Angel က ဇန္န၀ါရီလ 21, 2012 ရက်နေ့ 3:43pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး 31/12/1012 ဆိုတာကလဲမှားနေသလိုပဲနော်။ဟုတ်လား။ မင်းမော်ထွန်း က ဇန္န၀ါရီလ 21, 2012 ရက်နေ့ 2:33pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား စတိုင် တစ်မျိုးဘဲ မိစနေ က ဇန္န၀ါရီလ 21, 2012 ရက်နေ့ 1:56pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ဟိဟိ lady fool lay က ဇန္န၀ါရီလ 21, 2012 ရက်နေ့ 1:12pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ခွိ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်နေမှာပေါ့ဗျ RSS
1. အသက် (၁၈) နှစ်အောက် မဖတ်သင့်သော ညစ်ပတ်သည့်ဇာတ်လမ်း
2. လားရှိုးမြို့က သရဲခြောက်တဲ့အိမ်
3. *****အံဆုံးမပေါက်သေးသော ******
4. facebook photo lock ​ဖြေနည်း
ဒီတစ်ပတ် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဘလော့များ
2. မငိုပါနဲ့လား ချစ်သူ
5. မိန်းမများကို အန်စေသော ယောက်ျား နှင့် ယောက်ျားများကို အန်စေသော မိန်းမ